Nhau - European nyowani yekutengesa mota inokwira ne1.1% gore-ne-gore munaGunyana: ACEA
Kunyoreswa kwemotokari kuEurope kwakakwira zvishoma munaGunyana, iko kuwedzera kwekutanga gore rino, data remaindasitiri rakaratidza neChishanu, zvichiratidza kudzoka mubazi remotokari mune mimwe misika yeEurope uko hutachiona hwecoronavirus hwakaderera.
MunaGunyana, kunyoreswa kwemotokari kutsva kwakakwira ne1.1% gore-ne-gore kusvika kumamirioni 1.3 emota muEuropean Union,
Britain neEuropean Free Trade Association (EFTA) nyika, nhamba kubva kuEuropean Automobile Manufacturers 'Association (ACEA) yakaratidza.
Misika mishanu mikuru yeEurope, zvisinei, yakatumira mhedzisiro yakavhenganiswa. Spain, United Kingdom neFrance vakashuma kurasikirwa, nepo kunyoreswa kukakwira muItari neGerman, iyo data yakaratidza.
Volkswagen Group uye Renault kutengesa kwakakwira ne14.1% uye 8.1% munaGunyana zvichiteerana, nepo PSA Boka rakataura kudonha kwe14.1%.
Vagadziri vemagetsi vakatumira kurasikirwa munaGunyana nekutengesa kweBMW kudonha 11.9% uye mukwikwidzi waDaimler akataura nezve 7.7% kudonha.
Mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore, kutengesa kwakadonha ne29.3% sezvo coronavirus kukiya yakamanikidza vagadziri vemotokari kuvhara dzimba dzekuratidzira muEurope.
Mabasa uye Mabasa
Iyo yekuvhundutsa absorber yakaiswa pakati pemota muviri uye tai, pamwe nechitubu. Elasticity yechitubu nyorova inovhunduka kubva pamugwagwa pamusoro, zvisinei, inokonzeresa mota kudedera nekuda kwekusimba kwayo hunhu. Chikamu chinoshandira kunyorova kunonzi "shock absorber", uye viscous resistance force inonzi "damping force".
Shock absorbers chigadzirwa chakakomba chinogadza hunhu hwemotokari, kwete chete nekuvandudza mhando yemafambiro asiwo nekushanda kudzora maitiro uye kugadzikana kwemotokari.
Hood Shock Inotora, Wheel Hub, Mberi Kudhiraivha Gonhi, Tire Bhora Rakabatana, Shock Yekupinza Rubber, Shock Inotora Bolt,